Ukuhlaziywa kwephrinta ye-3D Legio evela kumkhiqizi waseSpain uLeon 3D | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Ukuhlaziywa kwephrinta ye-3D Legio evela kumkhiqizi waseSpain uLeon 3D
UToni de Frutos | | Ukuphrinta kwe-3D
Kulesi sibuyekezo sizohlaziya iphrinta ye-3D kukhithi yokuhlanganisa iLegio kusuka kumkhiqizi Leon 3D, iphrinta yakhelwe futhi yenziwa eSpain ngesisekelo sokuphrinta esibanzi futhi esikwazi ukuphrinta ngezinto ezahlukahlukene.
Kuwebhu singathola amaphrinta angenakubalwa e-3D kits ukuzihlanganisa ngamanani athengeka kakhulu. Le mininingwane inciphisa kakhulu intengo uma iqhathaniswa namayunithi asevele ahlanganisiwe kusuka efektri. Sizohlola ikhwalithi yomkhiqizo ohlinzekiwe por ULeon 3D umkhiqizi kazwelonke eminyakeni emine nje kuphela ekwazile ukuzinza emakethe eshubile lapho kunemikhiqizo eminingi engenakubalwa nobuchwepheshe obusha obufakwa nsuku zonke.
1 Ukuqhathaniswa kwemikhiqizo efanayo
2 Izici zobuchwepheshe kanye nemininingwane yephrinta yeLegio evela kumkhiqizi waseSpain uLeon 3D
2.1 Isibonisi nekhiphedi
2.2 Usayizi, isisindo, indawo yokuphrinta nesisekelo esishisayo
2.3 Ukulinganisa ipulatifomu yokwakha
2.4 Ijubane lokuphrinta nokulungiswa
2.5 I-LEONOZZLE V2 extruder
2.6 Ukuxhumana, i-firmware nokusebenza okuzimele
3 Ezinye izici zobuchwepheshe zephrinta yeLegio de Leon 3D
4 Insizakalo yangemva kokuthengisa nokusekelwa okuvela emphakathini woMenzi
5 I-LEON 3D intambo nemicu evela kweminye imikhiqizo.
6 Intengo nokusatshalaliswa
8 Umbono woMhleli
Ukuqhathaniswa kwemikhiqizo efanayo
* I-BQ inikeza ithuluzi lokunwebisa ukufaka umbhede oshisayo kubaphrinta bakho. ** I-Original Prusa inikeza ikhithi ekabili yokuxhuma.
Kubukeka sengathi inani lamaphrinta ahlukene ekhithi asuselwa kumklamo wePrusa 3D Printer cishe alinamkhawulo. Kepha uma sigxila kuphela kulabo abanokusekelwa kwezobuchwepheshe, okwenziwe yinkampani eyaziwayo, amathuba ancipha kakhulu. Kulesi simo, iphrinta yomkhiqizi kaLeonés iba nenhle kakhulu, ine- isilinganiso esihle kakhulu sekhwalithi / sentengo. Futhi izici eziningi zobuchwepheshe esizilindele kwiphrinta engxenyeni yayo.
Umkhiqizo weLeon 3D sihlanganisa base ashisayo futhi «allinmetal» extruder kepha, ucabangela ukuthi iphrinta yekithi enedizayini efana ne-prusa futhi isuselwa ku-firmware efanayo, besingathanda ukuba nayo yamakhithi wokuthuthuka amaningi njenge ukuzilinganisela noma ukukhipha kabili. Sikholwa ukuthi ukuyihlinzeka ngalokhu kuthuthukiswa kungasho intuthuko enzima kakhulu yokuthi uma umphakathi owenzayo osebenzisa le mishini uzikhulisa bona bazosimangaza ngokusebenzisa lokhu kuthuthukiswa ngendlela yokuzenzela.
Izici zobuchwepheshe kanye nemininingwane yephrinta yeLegio evela kumkhiqizi waseSpain uLeon 3D
ILegio isuselwe kumklamo ofana nePrusa eyaziwa kakhulu. Ingabe i- Iphrinta yeCartesian enohlaka lwe-methacrylate, eziningana izingxenye eziphrintiwe nenye iphrinta, izinduku ezifakiwe kanye nenani elikhulu lamantongomane nama-washer ukubamba yonke.
El i-montage es cha kukhulu kakhulu eziyinkimbinkimbi nokulandela imibhalo emihle umkhiqizi anayo esiteshini sayo se-YouTube ingaqedwa ngamahora ama-3 noma ama-4. Idizayini yephrinta yenza ukuthi ukukhweza kuqinile kakhulu futhi akudingeki ukuthi silungise kabusha nganoma yisiphi isikhathi akunantongomane iphrinta. Iphrinta ineqophelo eliphezulu futhi izingxenye eziphrintiwe e-PLA isetshenziswe emhlanganweni wayo azilimazi noma amaphutha wokuphrinta.
Ikhanda le-extrusion lihamba ngezembe le-Z ne-X ngenkathi ipuleti yokwakha yenza ukunyakaza okuhlobene ne-Y eksisi. motor motor edlulisa ukunyakaza ngochungechunge lwenjoloba lwama-axes we-X ne-Y. Uma kwenzeka kuba i-eksisi , ukunikeza ukuzinza okwengeziwe emaphepheni, kuyasetshenziswa 2 isinyathelo motors ukuthi ngezinduku ezifakiwe kuhambise ikhanda phezulu naphansi.
Isikrini se-LCD futhi inkinobho yokulawula zitholakala ngaphezulu kwephrinta bambelela ngokuqinile kufreyimu ye-methacrylate uqobo. Ngenkathi isondo elikuvumela ukuthi usebenzise imenyu linokuthinta okulungile, okufanayo akwenzeki nge izinkinobho ze- "IKHAYA" ne "KHansela" ukuthi yize befeza umsebenzi wabo ngokuphelele, bane-rubbery, hhayi eqinile kakhulu futhi dlulisa umuzwa wobucayi. Kunoma ikuphi, phakathi nezinsuku ezingama-45 ukusetshenziswa okunamandla kwephrinta kuqhubekile kulokhu kuhlaziywa, asikaze sikubone noma yikuphi ukuwohloka noma ukonakala kuzo.
Usayizi, isisindo, indawo yokuphrinta nesisekelo esishisayo
Sibhekene nephrinta elula engasindi neze Ama-8 kilos, nge indawo yokuphrinta 200 cm3 (esimweni semodeli ejwayelekile). Iyunithi ethunyelwe ngumenzi ukuthi ihlaziye ibe nokuthuthuka okwandisa indawo yokuphrinta ibe ngamamitha ayi-200x300x200 ophanayo. Endaweni yokuphrinta yalezi zilinganiso ungaphrinta noma yini ongayicabanga ngaphandle kokuphelelwa isikhala sokwengeza zonke izingcezu. I- indawo yokuphrinta ingilazi ephethwe uhlelo lokulungisa minimalist kepha uqinisekile ukuthi ayinciphisi indawo yokuphrinta.
Ukuhlanganiswa kochungechunge kwe- umbhede ofudumele Kuyinto ebalulekile ngoba inweba kakhulu inani lezinto esingazisebenzisa nephrinta. Usebenzisa ukushisa okufanelekile kwento ngayinye embhedeni oshisayo, asizange sibe nezinkinga zokulwa kungaphrintiwe. Umbhede oshisayo ufika ulungele ukuhlangana ngaphandle kokushiselwa. Futhi inekhwalithi enhle kakhulu usabalalisa ukushisa ngokulinganayo phezu kobuso bawo bonke.
Ukulinganisa ipulatifomu yokwakha
El izinga kwesisekelo kuyinto inhlukano futhi sekwenziwe ngokulungisa ngezikulufo ezi-4 etholakala ekhoneni ngalinye lesisekelo sokuphrinta nokuthi ngesiphethu inikeze ukungezwani okudingekayo ukuze ikwazi ukulungiswa. Yize lesi sixazululo sisebenza ngokuphelele, kunezinhlelo eziningi zokuzenzakalela ezimakethe (imvamisa zisebenzisa i-laser noma i-capacitive sensors) futhi bekungaba yimpumelelo enkulu kumenzi ukuthi engeze eyodwa ekusebenzeni kwephrinta, njengekhithi isandiso.
Ijubane lokuphrinta nokulungiswa
Iphrinta ingaphrinta kusuka ngejubane eliphansi kakhulu, cishe ama-50 mm / s kuze kufike ku-250 mm / s lapho siphrinta izinto ezikuvumelayo, njenge-PLA noma i-ABS. Kunoma isiphi isivinini esisisebenzisayo, ukuphrinta kuyi ezinzile kakhulu futhi akukho kunyakaza okubonwayo, impela ngu ukuqiniswa kwe-methacrylate kwenzenjani phakathi kwezakhiwo eziqondile nezime mpo.
Emibonweni yokuqala sabona ukwahlukaniswa okuthile phakathi kwezendlalelo futhi sikwazile ukuqinisekisa ukuthi kumaphrofayli wezinto ezilungiselelwe i-Slic3r ukugeleza kwakungaphansi kwe-100%, ngokuthinta leli nani sithole izinto eziqinile.
Okuhle kakhulu ukulungiswa kwesendlalelo Z lokho kungafinyelelwa ngale phrinta Ama-microns angama-50, ikhwalithi engaphezulu kokwanele kepha esizokusebenzisa okuncane osukwini nosuku kwephrinta ngoba imvamisa sikhetha izinqumo ezithi, ukunikela ngokuningiliziwe imininingwane yokuqeda, kusivumele ukuthi siqedele ukuphrinta ngokushesha.
I-LEONOZZLE V2 extruder
El extruder ekhethwe ngumkhiqizi wale phrinta yi- ukuthuthukiswa siqu "allinmetal" ibizwa ngokuthi i-LEONOZZLE V2. Lezi zinhlobo ze-extruders zinikeza imiphumela emihle kakhulu, kungakhathalekile okokusebenza okukhethiwe futhi muva nje sekuthandwa kakhulu emphakathini woMenzi. Isikhiphi somkhiqizi i- "allinmetal" extruder eyizingqabavu ekwazi ukukhipha zonke izinhlobo zezinto zokwakha, Simsebenzele ukuthi abhekane namasampula ezinhlobonhlobo zemicu enemingcele ehlukene yokuphrinta futhi uphathe zonke izinto ngaphandle kwenkinga. Umkhiqizi uthi kunjalo uyakwazi ukuphrinta ama-96% wezinto ezisemakethe, njengoba singakwazanga ukuthola noma iyiphi inkinga engu-4%.
Le extruder ifaka isondo eliphindwe kabili nesikulufu sokucindezela intambo, ngaleyo ndlela kuqinisekiswe ukuthi amandla okudonsa abhekise ku-extruder azokwanela into ngayinye. Extruder ingafinyelela amazinga okushisa afinyelela ku-265º C akunankinga, esiyihlolile kepha asikatholi lutho oluyidingayo.
Ukuxhumana, i-firmware nokusebenza okuzimele
El umenzi weluleka ngokusebenzisana ne-Repetier Host okusebenzisa ngaphakathi i-Slic3r laminator. Ukwenza lula lo msebenzi Kuwebhusayithi yayo singalanda kokubili iphrofayli yephrinta naleyo yazo zonke izinto ezivame kakhulu. Amaphrofayli wezinto ezibonakalayo akhombisayo futhi akumele sikhohlwe ukuthi iphrinta ngayinye ingaba nokuhlukahluka okuncane ngokuya ngamazinga okushisa nokugeleza okufanele kulungiselelwe ukuthola ukuphrinta okuphelele kakhulu. Sikukwazisa ukuthi uphrinte isivivinyo noma into elula enamasethingi ahlukile ukuthuthukisa amaphrofayli amaphrinta wakho.
Kanye Lapho amafayela we-GCODE elayishwe ku-SD enikezwe iphrinta, ingasebenza ngokuzimela ngokuphelele. Kodwa futhi ifaka imbobo ye-USB ukuze sikwazi ukuyixhuma kwi-PC yethu futhi siyilawule kude. yini iphrinta ayinayo i-wifi, i-ethernet noma i-bluetooth, yize leli phuzu kuyinto esingayixazulula njalo sisebenzisa okusajingijolo esifake kuwo i-Octoprint. Uma ungathanda ukuthi sinikele ngendatshana ukuze ichaze ngokuningiliziwe ukuthi singakwenza kanjani lokhu kungezwa, sitshele emazwaneni!
El i-firmware yephrinta ingeSpanish futhi kusivumela ukuthi senze imisebenzi ejwayelekile kakhulu. Lapho upheqa imenyu siphuthelwa ithuba lokukhansela ukusebenza ngaphandle kokukuqedela. I-firmware isivele ifaka phakathi amathuba okucisha noma ukucisha amalambu kepha asitholanga kumadokhumenti ephrinta ukuthi kungenzeka lokhu.
Ngesikhathi sokuphrinta esibukweni saziswa ngezinto ezibaluleke kakhulu, njengakwezinye izikhathi sidinga ukuthi usitshele isikhathi esisele ukuqedela ukuphrinta Kuyaqhubeka. Futhi singashintsha zonke izici ezihlobene ne- amazinga okushisa, isivinini nokugeleza kwempahlaNgale mininingwane singakwazi ukuhlenga le mingcele bukhoma uma sibona noma yikuphi ukungahambi kahle okufanele kulungiswe.
Kusuka kwimenyu sizonikeza i-oda kuphrinta ukulinganisa umbhede, kepha akunakwenzeka ukulungisa i-offset ye-extruder usebenzisa isoftware.
Ezinye izici zobuchwepheshe zephrinta yeLegio de Leon 3D
Kunezinto eziningi ezingeziwe okuthi yize singeke sikwazi ukubiza izici zobuchwepheshe zihlobene ngokusezingeni nokusebenza kahle kwephrinta futhi sithanda ukuzihlola njengezinto ezibalulekile. Sizobukeza eminye imininingwane yephrinta eye yasidonsela amehlo ngokuhle noma ngokubi.
Okuthile okuvelele kulo iLegio uma kuqhathaniswa namanye amakhithi akhuphukayo yilokho akukho zintambo ezibonakalayo, konke kufihlwe ngobuhlakani, ngisho izifunda wephrinta kuyinto kufihlwe ngemuva kwepuleti le-methacrylate, le mininingwane inikeza iphrinta ukubukeka okuhle kakhulu. Ngendlela elula kakhulu, umenzi ukwazile ukwenza ubungcweti ngobuchwepheshe kuze kube seqophelweni lokuthi emehlweni omuntu wesithathu bazongabaza ukuthi sizihlanganisele thina uqobo.
Isici esisodwa esithemba ukuthi umenzi uzosithuthukisa kuzibuyekezo ezizayo ukufakwa kwe- isixhumi esijwayelekile sentambo yamandla. Njengamanje kuvinjelwe ngqo ekunikezelweni kwamandla. Uhlelo lwamanje luphephile uma sibamba ikhebula kahle, kepha ikhebula lohlobo lwe-PC (isixhumi se-IEC) elingaxhunywa liphinde lixhunywe kuprinta lihlala lithandwa. Futhi ukufakwa kwe-off switch bekungajabulisa. Kuyiqiniso ukuthi kokubekwe eceleni ukusetshenziswa kwephrinta akukukhulu ukwedlula lokho kwethelevishini lapho kubekwe eceleni kodwa kungukuthuthuka okulula ukukusebenzisa futhi okubalulekile kwabanye abasebenzisi.
Kepha singabenzi! Ngaphezu kwenkinga, yiphrojekthi yokuqala yephrinta yethu. Ngobuchwepheshe obuncane nokudonsa indawo yokugcina engapheli yeThingiverse kulula ukuyithola ukuguqulwa ukuzivumelanisa nale phrinta. Uyayamukela inselelo?
I-Los umsebenzi uyaphela Imvamisa iyinto entekenteke yamaphrinta lapho ithola njalo lapho siphrinta umthelela wenqola eyedlula ngaphandle, kujwayelekile ukuthi ihambise noma ikhulule ikhebula, ukuxazulula le nkinga umenzi anayo kuhlanganiswe ekwakhekeni kwezinye izingxenye. Kufike eqophelweni lokuthi lapho uthi shazi zingabonakali.
Enye imininingwane ebesiyithanda ukuthi ingomunye wamaphrinta ambalwa esiwabonile agcine ethathe isinqumo sokugxumela kuwo Ifomethi ye-microSD ekhadini lapho sethula khona amafayela we-Gcode azophrintwa, imininingwane enesifiso esizovumela ukuthi siyenze ngaphandle kwama-adaptha wefomethi. Ngaphezu kwalokho, iphrinta iza nekhadi elingu-8 GB lapho singabeka khona izingcezu eziningi zokuphrinta.
Ekugcineni kulesi sigaba, phawula ukuthi, ukuba yiphrinta evulekile, kuyi- iphrinta enomsindo njengakho konke okungenalo ibhokisi elingaphandle elinciphisa umsindo. Akucasuli kangako ukuthi kufanele ushiye igumbi lapho imishini ikhona kepha ungalindeli ukuthi uzokwazi ukuyishiya iphrinta uma othile ehlose ukulala eduzane.
Insizakalo yangemva kokuthengisa nokusekelwa okuvela emphakathini woMenzi
Ekugcineni, umenzi uyaqonda ukuthi indlela engcono yokuthola ukuthi ukuphrinta kwehlulekile ukuqhathanisa ingxenye yethu enesici nabanye ngephutha elifanayo bese ubala amaphutha okungenzeka ukuthi siwenzile. La umhlahlandlela wokuxazulula inkinga womkhiqizi ungenye ye izindlela ezingcono ukuthi sesihlangane kuze kube manje ukuze labo abaqala emhlabeni oyinkimbinkimbi wokunyathelisa we-3D ingaphrinta izinto zekhwalithi ngaphandle kwamaphutha.
ILegio yomkhiqizi waseSpain uLeon 3D wakhethwa njengomshicileli osemthethweni wezikhungo zemfundo iXunta de Galicia kanye nezikhungo zeBIT zeJunta de Castilla y León. Leli qiniso likunikeza nge isisekelo esikhulu sabasebenzisi okusiza ekusizeni ekwakhiweni nasekuthuthukisweni kwephrinta ngoba inguMthombo Ovulekile. Yize okwamanje asikatholi imininingwane eminingi noma ukuguqulwa kokuklanywa ngaphandle kweziteshi ezisemthethweni zomkhiqizo. Mhlawumbe kungathakazelisa ukuthi umenzi afake isithangami esisemthethweni lapho ezoletha khona umphakathi ndawonye, ​​axazulule izinkinga ezingavela ekusetshenzisweni kwemikhiqizo yayo futhi asebenze njengesixhumanisi phakathi kwenkampani namakhasimende.
Umenzi une- isevisi enhle emva kokuthengisa con ochwepheshe abanolwazi olukhulu okokusebenza kwakho nokuthi ungasiza kanjani ukuxazulula noma yiziphi izinkinga ezingavela. Lokhu kuyimininingwane ebaluleke kakhulu kubasebenzisi abaningi futhi umenzi wayo ufuna ukuyenza ibe ngomunye wemikhonto ezoqhakambisa ngayo imikhiqizo yayo ngaphezu kwaleyo yomncintiswano.
I-LEON 3D intambo nemicu evela kweminye imikhiqizo.
Ngephrinta, umenzi usinike ikhoyili ye-Ingeo PLA Filament ngombala Ophuzi. I- Intambo ye-PLA okukhangiswa ngumenzi kuyintambo de buena calidad, Kulula ukuphrinta ngokunamathela okuhle embhedeni wokwakha naphakathi kwezendlalelo.
El intambo yokhuni kuhlinzekwe ngumkhiqizi uthole ukuphrinta okuhle lapho umbala nokuqeda kodwa akubonakali kufaka okuqukethwe okuphezulu kwezinhlayiya zokhuni. Ngokungafani nemicu yezinkuni yabanye abakhiqizi, its izici zobuchwepheshe zisondele kakhulu kunezo ze-PLA kunalezo ze-DM Lokhu kusiza kakhulu ukuphrinta futhi kuthuthukise ukuxazululwa kwezingcezu ngemali yokulahlekelwa okuncane ekufaneni kokuthinta nephunga (akunuki neze okhunini).
El Intambo ye-PETG ukuthi umenzi anakho kukhathalogi yakhe une ukucaca okuphezulu, ukuguquguquka okuhle kakhulu futhi a ukumelana okuphezulu komthelela. Kodwa-ke, kulabo abangakaze basebenzise lolu lwazi, sikuxwayisa ukuthi akulula ukuthola umbono omuhle. Kufanele udlale kakhulu ngokugeleza nethempelesha kuze kube yilapho ukwazi ukulungisa amapharamitha afanele futhi umphumela uzoncika kakhulu ekuxakekeni kwento ekhethiwe.
Umenzi unesivumelwano nexhaxha lezikhungo U-Leroy Merlin ukuphakela imikhiqizo yakho. Lokhu kwenza kube lula kakhulu kithi ukubhekisisa ikhwalithi yezinto zokwakha zemikhiqizo yakho. Futhi bane- esitolo se-intanethi lapho bathengisa khona ikhathalogu yabo yonke futhi singabathola naku- Amazon.
El Intengo esemthethweni wephrinta kuyinto 549 € Uma sikhetha isisekelo sokuphrinta esiyisikwele esingu-200 × 200, uma kunalokho ukhetha isisekelo eside esingu-200 × 300, intengo inyuka ngama- € 100. Kumele kucatshangwe ukuthi kuzo zombili izimo isisekelo sokuphrinta sinombhede oshisayo.
Uma unesibindi sokuzihlanganisela iphrinta, kepha ufuna i- umkhiqizo uvivinywe kakhulu futhi usekelwa ngemuva kokuthengisa engxenyeni yomkhiqizi obhekene nokukhetha okuhle. Uma imakethwa ezikhungweni zeLeroy Merlin, ungangena kokunye oseduze bese ushiya nephrinta ngaphansi kwesandla sakho, noma kulokhu kulokhu sikhetha ukubhekana ngqo nomenzi, noma ngabe lokho kusho izindleko zokuthumela futhi kufanele ikhaya lokulethwa.
ILegio evela kumkhiqizi waseSpain uLeon 3D une- Inani elikhulu lentengo futhi kuzokuvumela ukuthi usebenze ngobuningi bezinto esingazithola emakethe zisebenzisa ikhwalithi eprintekayo yokuphawula. Njengoba kungumshini owakhiwe kahle, sizokwazi ukuphrinta amahora amaningi ngaphambi kokuthi senze noma yikuphi ukunakekelwa.
Sikujabulele kakhulu ukusebenzisa lo mkhiqizo futhi sinethemba lokuthi umenzi uzoqhubeka nokwenza ngcono i-KIT ukuze iguqule umkhiqizo ophawuleka ube omuhle kakhulu.
Njengesifinyezo futhi ukuze ubone ukuthi le phrinta isebenza kanjani, siyakushiya ividiyo emfushane lapho ungabuyekeza khona konke okuxoxwe ngakho kulesi sihloko:
Isilinganiso sezinkanyezi esingu-3.5
Ukubuyekezwa kwe: UToni de Frutos
Ikhwalithi ephezulu extruder
Ukubambelela okuhle kubonga umbhede oshisayo
Umhlahlandlela wephutha ku-inthanethi obonakalayo futhi ofundisayo
I-firmware encane eguqukile
Izintambo ezinentambo ngqo emthonjeni
Akukho switch yamandla
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Ukuhlaziywa kwephrinta ye-3D Legio evela kumkhiqizi waseSpain uLeon 3D
Ngibe neLegio isikhathi esithile impela futhi ngijabule kakhulu ngayo. Kulula ukuyisebenzisa futhi kulula ukuyigcina. Amaphrofayili wokuphrinta ahlinzekwa ngumthengisi kuwebhusayithi yabo enza kube lula ukusebenza ngezinto ezihlukile.
UManuel Sanchez Legaz kusho
Nginentshisekelo kuphrinta yeLegio 3D, ngifisa ukwazi kabanzi ngayo, amanani, izindawo zokukhokha, amafayela wokuphrinta nokusiza abaphathi bawo, kanye namanani entengo yezingxenye ezingasebenzi kanye namaphrofayili ahlukile wokuphrinta.
Ngikubingelela kusengaphambili sss
UManuel Sanchez Legaz
Phendula uManuel Sánchez Legaz
U-Obi Juan uwina umklomelo we-O'Really Open Source
Inyama nemfuyo isibonisa iphrinta yayo yenyama ye-3D